MB 2015 Jolay - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2015 Jolay
Rehefa mieritreritra vavaka aho dia tsaroako ny tantara iray. Nisy lehilahy iray izay maniry ny hivavaka araka izay azony atao. Amin'ny maha Jiosy azy dia fantany fa ny Jodaisma nentim-paharazana dia mivavaka mafy amin'ny teny hebreo. Tsy nahay fiteny hebreo izy, satria tsy mahay mamaky teny. Ka ny hany nahafantarany azy no nataony. Naveriny foana tao anaty vavak'izy ireo ny abidia hebreo. Rabi iray izay nahare ilay lehilahy nivavaka ary nanontany azy ny antony nanatanterahany izany. Namaly ilay rangahy hoe: "Hotahin'i Saint, hotahina izy, mahalala izay ao am-poko. Omeko azy ny taratasy ary apetrany ao ny tonony."
Mino aho fa nohenoin’Andriamanitra ny vavak’ilay lehilahy, satria ny fon’izay mivavaka no zava-dehibe indrindra amin’Andriamanitra. Zava-dehibe koa ny teny satria mampita ny hevitry ny teny. Andriamanitra izay El Shama (ilay Andriamanitra mandre, Salamo 17,6), mandre ny vavaka amin'ny fiteny rehetra ary mahazo ny pitsopitsony sy ny nuance amin'ny vavaka tsirairay.
Rehefa mamaky ny Baiboly amin'ny fiteny anglisy isika dia mety hitranga tsy hanadino ny sasin-tenim-pirenena sasany sy ny fihetseham-po izay midika fa ny fiandohan'ny Baiboly no manome antsika amin'ny teny hebreo, aramaika ary grika. Ohatra, ny teny hebreo mitzvah dia nadika mahazatra amin'ny teny anglisy hoe bid. Saingy avy amin'izany fomba izany dia misy olona maniry ny hahita an'Andriamanitra ho toy ny fifehezana hentitra izay mitantana ny fitsipi-pitondran-tena. Saingy manaporofo i Mitzvah fa mitahy sy manome voninahitra ny olony Andriamanitra ary tsy enta-mavesatra izy ireo. Rehefa nomen'Andriamanitra ny olony voafidiny dia natolony aloha ireo fitahiana mitondra fankatoavana, fa mifanohitra amin'ny ozona ateraky ny tsy fankatoavana. Hoy Andriamanitra tamin'ny olony: "Tiako raha miaina toy izany ianao, mba hanananao fiainana sy ho fitahiana amin'ny hafa." Ireo olom-boafidy dia nomena voninahitra sy nomena tombontsoa ny hiaraka amin'Andriamanitra ary maniry ny hanompo azy. Nodidiany tamim-pitiavana an'Andriamanitra ny hiaina amin'ity fifandraisany amin'Andriamanitra ity. Amin'izany fomba fijery izany dia tokony hanantona ny lohahevitry ny vavaka ihany koa isika.
Ny Jodaisma dia nandika ny Baiboly hebreo ho midika fa ilaina ny mivavaka in-telo isan’andro, ary fotoana fanampiny amin’ny Sabata sy ny andro firavoravoana. Nisy ny vavaka manokana alohan’ny hisakafoana sy aorian’ny fisoloana akanjo, fanasana tanana ary fandrehetana labozia. Nisy ihany koa ny vavaka manokana rehefa nisy zavatra tsy mahazatra hita, na avana mijoalajoala na fisehoan-javatra hafa mahafinaritra. Rehefa niampita tamin'ny mpanjaka na sara hafa ny lalana na rehefa nisy loza lehibe, toy ny B. ady na horohoron-tany. Nisy vavaka manokana rehefa nisy zavatra tsara na ratsy nitranga. Vavaka alohan'ny hatoriana amin'ny hariva ary rehefa mifoha maraina. Na dia mety ho lasa fombafomba na fanelingelenana aza izany fomba fivavahana izany, dia ny hanamora ny fifandraisana tsy tapaka amin’Ilay miambina sy mitahy ny olony no tanjona. Nandray izany fikasana izany ny apostoly Paoly rehefa niresaka 1. Thessalonians 5,17 Nananatra ny mpanara-dia an’i Kristy hoe: “Aza mitsahatra mivavaka”. Ny fanaovana izany dia ny fiainana miaraka amin’ny fikasana tsara eo anatrehan’Andriamanitra, ny ho ao amin’i Kristy ary ny firaisana Aminy amin’ny fanompoana.
Io fomba fijery momba ny fifandraisana io dia tsy midika hoe mandao ny fotoam-bavaka raikitra ary tsy manatona azy amin'ny fomba voalamina amin'ny vavaka. Nilaza tamiko ny mpiara-belona iray hoe: "Mivavaka aho rehefa mahazo fitaomam-panahy." Hoy ny iray hafa: "Mivavaka aho rehefa misy dikany ny manao izany." Heveriko fa ireo fanehoan-kevitra roa ireo dia tsy mijery ny zava-misy fa ny vavaka mitohy dia fanehoana ny fifandraisantsika akaiky amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandro. Izany dia mampahatsiahy ahy ny Birkat HaMazon, iray amin'ireo vavaka manan-danja indrindra amin'ny Jodaisma, izay atao amin'ny sakafo mahazatra. Izy io dia manondro ny 5. Mosesy 8,10izay manao hoe: "Rehefa manan-kohanina ianareo, dia miderà an'i Jehovah Andriamanitrareo noho ny tany soa izay nomeny anareo." Rehefa nankafy sakafo matsiro aho, dia ny hany azoko atao dia ny misaotra an’Andriamanitra izay nanome ahy izany. Ny fampitomboana ny fahatsiarovantsika an'Andriamanitra sy ny anjara asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia iray amin'ireo tanjona lehibe amin'ny vavaka.
Raha mivavaka fotsiny isika rehefa mahazo fitaomam-panahy hanao izany, raha efa manana fahalalana momba ny fanatrehan’Andriamanitra isika, dia tsy hampitombo ny fahatsiarovantsika an’Andriamanitra. Ny fanetren-tena sy ny fahatahorana an’Andriamanitra dia tsy tonga amintsika toy izany. Izany no antony iray hafa tokony hahatonga ny vavaka ho isan’andro amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra. Mariho fa raha te hanao zavatra tsara isika eto amin’ity fiainana ity, dia tsy maintsy mivavaka foana na dia tsy sitraka aza izany. Toy izany koa ny amin’ny vavaka, sy ny fanaovana fanatanjahan-tena na ny fifehezana zava-maneno, ary ny farany indrindra dia ny hahatongavana ho mpanoratra mahay (ary fantatry ny maro fa tsy anisan’ny asa tiako indrindra ny manoratra).
Nisy pretra Ortodoksa iray nilaza tamiko indray mandeha fa nanao lakroa nentin-drazana izy nandritra ny vavaka. Rehefa mifoha izy, ny zavatra voalohany tokony hisaorana dia ny miaina ao amin’i Kristy iray andro hafa. Rehefa nanombo-tena tamin'ny hazo fijaliana Izy dia namarana ny vavaka tamin'ny teny hoe: "Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina". Ny sasany milaza fa io fomba fanao io dia teo ambany fiahian'i Jesosy ho fanoloana ny fanao jiosy amin'ny fanaovana fehiloha mivavaka, ny hafa kosa milaza fa tamin'ny taorian'ny nananganana an'i Jesosy no famantarana ny hazofijaliana. fa fomba fanao mahazatra izany tamin'ny 200 AD, raha nanoratra i Tertullian: "Amin'ny zava-drehetra ataontsika dia apetratsika amin'ny lohan'andianay ny famantarana ny lakroa. Isaky ny miditra isika na miala toerana; alohan'ny akanjo; alohan'ny hatory; rehefa mandray ny sakafontsika izy; rehefa mandrehitra ny jiro amin'ny hariva isika; alohan'ny hatory; rehefa mipetraka izahay mamaky; alohan'ny asa tsirairay dia ataontsika eo amin'ny handrina ny famantarana ny lakroa. "
Na dia tsy miteny aza aho hoe mila fombafomba fivavaka manokana, ao anatin'izany ny hazo fijaliana, dia mamporisika anao aho hivavaka tsy tapaka, tsy tapaka ary tsy tapaka. Manome fomba mahasoa maro ho antsika hahafantatra hoe iza izany Andriamanitra izany ary iza isika hifandraisantsika aminy mba hivavaka foana. Azonao an-tsaina ve ny fahalalantsika ny halalin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra raha mieritreritra sy manompo an'Andriamanitra amin'ny maraina sy mandritry ny andro isika ary alohan'ny hatory? Raha mihetsika toy izany isika, dia azo antoka fa hanampy amin'ny hoe "mandeha" ara-tsaina io andro io, mifandray amin'i Jesosy.
Aza mitsahatra mivavaka
PS: Miangavy aho mba hiray fo amiko sy amin'ny mpikambana maro hafa ao amin'ny Vatan'i Kristy amin'ny vavaka ho an'ireo havan-tiana maty voatifitra nandritra ny fivoriam-bavaka tao amin'ny Fiangonana Emanuel African Methodist Episcopal (AME) ao afovoan-tanànan'i Charleston, Carolina Atsimo. . Sivy tamin’ireo rahalahy sy anabavintsika kristianina no nisy namono. Ity tranga mahamenatra sy feno fankahalana ity dia mampiseho amintsika fa miaina ao anatin'ny tontolo lavo isika. Asehon’izany amintsika mazava tsara fa manana andraikitra isika hivavaka mafy ho an’ny fiavian’ny fanjakan’Andriamanitra farany sy ny fiavian’i Jesoa Kristy fanindroany. Enga anie isika samy hifona am-bavaka ho an’ireo fianakaviana tratry ny loza. Aoka koa isika hivavaka ho an’ny fiangonana AME. Gaga aho tamin’ny fomba namalian’izy ireo, miorina amin’ny fahasoavana. Fitiavana sy fifamelana naseho ho malala-tanana ao anatin'ny alahelo be. Tena fijoroana ho vavolombelona mahatalanjona momba ny filazantsara izany!
Anarantsika koa ny olona rehetra ao anatin'ny vavaka ataontsika sy ireo fanelanelanana mijaly amin'ny herin'ny olombelona, ​​aretina na zava-tsarotra hafa amin'izao andro izao.